डिजिटल महिला कार्यक्रमले यसरी फेरियो जिन्दगी « Sakchyam Programme
विकट भेगको भए पनि जन्मघरको अवस्था समान्य थियो । तर परिवार ठुलो भएको कारण हाम्रो लालनपालनका लागी बुवा आमाले सधै नै दुःख गर्नुपर्यो । घरको खेतीपातीले मात्र हाम्रो परिवार पाल्न गाह्रो भए पछि बुवा परिवारको खुशी र हाम्रो शिक्षा दिक्षाको लागी मुङ्गलान(भारत) जानुभयो । यसरी सन्तानका सुख र हँसिलो मुहारका लागी बुवा आमाले हाडछाला घोटेर दिन रात केही नभनी दुःखका पहाडहरुलाई चिर्दै हामीलाई सधै भरि सुखकै अनुभुती दिनुभयो । आखिर बुवा आमाका सपना भनेका तिनै सन्तान त हुन नि । घरको माया ममतामा पुल्पुलिएर भनु वा साथी संगतीमा लागेर मैले कक्षा ७ सम्म मात्र पढाईलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएँ । त्यो बेलाको बुद्घि भनौँ, पढाईका लागि यस्तो दुःख गर्नुभन्दा नाम लेख्न र किताब पढ्न जाने भैहाल्यो नि भनेर म लगायत मेरा अन्य साथीहरुको सोच आयो । धेरै पढेर नि गर्नु केहीछैन, छोरीको जातले जति पढे पनि अर्काको घरमा विहे गरेर पठाईहाल्छन् । कसैका छोरीले जागीर पनि त खाएका छैनन् भन्ने सोच आयो र स्कुल जान छोडेँ। त्यस समयमा घरमा बुवा, दाजुहरु हुनुहुन्नथ्यो । पछि दाजुले मैले पढाई छोडेको थाहा पाउनुभयो । मलाई पढाइको महत्वको बारेमा धेरै सम्झाउनुभयो । तर आफुसँगै पढेका साथीहरु माथिल्लो कक्षामा पुगिसकेकाले लाजको कारण मैले पढाईलाई कुनै पनि हालतमा निरन्तरता नदिने निर्णय गरेँ ।
In photo: Laxmi Dueba (holding the tablet), along with other Digital Mahilas and Sakchyam Team in Mastamandu Digital Point.
This article was originally published in bankingkhabar.com on 9th January 2018.
Many rural areas of Nepal have Microfinance Institutions (MFIs) branches serving the local population, however, still, there are scattered pockets...(more...)
From Helpless to Hopeful: How BeingaDigital Mahila Changed Geeta’s Life
Sakchyam’s Digital Mahila is the first women-led technology campaign in the microfinance industry in Nepal, where women are equipped with...(more...)